Kulesi sihloko sizoxoxa esihlwabusayo futhi unempilo impande kwezitshalo wabiza iJerusalema artichokes. EJerusalema artichoke kubhekwa okwazalelwa kuyo i-Nyakatfo Melika, lapho kuthandwa kakhulu kuze kube yilolu suku. EYurophu lehla ngokushesha inani lesi sihlahla esiyingqayizivele kwabuyela e 1605, kodwa eRussia ukubonwa ngekhulu XVIII. Ngeshwa, iJerusalema i-artichoke, property ezingaba wusizo kakhulu, futhi abazange zithandwe ezweni lethu. ERussia, lokhu zemifino impande is kaningi ngokuthi iJerusalema i-artichoke noma ubhekilanga zasendle. Isibongo wathola akukhona nje ukuqondana kwezinto, iqiniso liwukuthi eJerusalema artichoke ngempela igabade kakhulu (amamitha amabili) sunflower. EJerusalema artichoke kuyinto zisetshenziswa nge uhlelo impande evuthiwe, sibonga ayezoba Azikho nesomiso.
EJerusalema artichoke - sezindawo ewusizo
Kubuhlungu ukuthi abantu abaziyo mayelana izakhiwo ezuzisayo isitshalo esiyingqayizivele eJerusalema artichoke ngesihloko elaziwayo elincane. Izinzuzo kusobala, ngoba amumethe carbohydrate, 77% okuyinto inulin. Futhi yalolu ketshezi ngesikhatsi isitoreji ivame ukuba ibe fructose, okuyinto ukuba kubaluleke kakhulu kubantu abanesifo sikashukela ezaziwayo. Ngaphezu carbohydrate, iJerusalema i-artichoke iqukethe omningi fibre ewusizo, amavithamini kanye izakhi ezihlukahlukene trace. U-vitamin C, insimbi, potassium - zonke iqukethe artichoke. izakhiwo awusizo abagcini lapha, kodwa lokhu okushiwo ngenhla izimfanelo esemqoka yalolu impande esiyingqayizivele.
Isicelo eJerusalema artichoke ngezinjongo zokwelapha
Njengoba sekushiwo, izimpande babe ukunambitheka omuhle, kodwa abantu kule azi, hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa nangenxa yeJerusalema artichokes etshalwa. izakhiwo ewusizo impande asetshenziswa ukwelapha nokuvimbela izifo ezithile. Ngenxa yokuthi ijusi eJerusalema artichoke uyakwazi ukwehlisa asidi esiswini, it is kahle kusiza isilungulela. Kanye juice eJerusalema artichoke kahle kusiza ukuqunjelwa kanye esiswini izinhlungu ezihlukahlukene.
Uma uhlushwa tachycardia, umfutho wegazi ophakeme, futhi isifo sokuqina kwemithambo yegazi, it is kakhulu Kunconywa ukuba adle izimpande eJerusalema artichoke, ngoba bayakwazi kakhulu ukunciphisa umthelela lezi zifo emzimbeni. Izimbangela Zokuntuleka lesi sitshalo usizo olukhulu ngabantu abaphethwe isifo sikashukela neinsulinovym, ngoba ziqukethe esiningi fructose. Futhi, ngakho-ke, eJerusalema artichoke kusiza sebethule nosawoti, ukukhuluphala ngokweqile igazi.
Abantu abahlala emadolobheni amakhulu, ikakhulukazi kufanele sinake impande, njengoba uyakwazi ukuhlukana emzimbeni radionuclides, izinsimbi ezisindayo kanye ubuthi ehlukahlukene. Abantu asebekhulile bakudinga ukudla ijusi yezithelo eJerusalema artichoke zokunciphisa cholesterol egazini.
Isici ezimbi eJerusalema artichoke yikhono layo ukwandisa ukubuyisa. Ngakho-ke, abantu abaphethwe i-flatulence, ungahlukumezi le impande kwezokwelapha. Kodwa kumelwe ngivume, lokhu ethile akulutho ngokumelene okwenza izinzuzo ezisobala.
Ukusetshenziswa artichoke e Cosmetology
Impande izitshalo eJerusalema artichoke nayo kabanzi izimonyo. Akhiphe i-artichoke izithelo siyingxenye okhilimu abaningi ngoba imibimbi. Kodwa-ke akudingekile ukuba ukuthenga izimonyo ezibizayo, njengoba yilowo nalowo owesifazane osuke uzokwazi ukwenza buso zabo eyenziwe artichoke. Ukulungisa buso kumele kudlule ezimpandeni ngokusebenzisa grinder inyama bese wengeza mass umphumela yamafutha kancane. Sebenzisa lesi imaski kuyadingeka kanye ngezinsuku ezintathu. Kungakapheli nenyanga, ungabona kanjani encane imibimbi zinyamalale, isikhumba eshelelayo bese kuba soft futhi kumnandi touch.
Njengoba ubona eJerusalema artichoke, izakhiwo ewusizo okuyinto zisobala, kumelwe ezimpilweni zethu. Sekuyisikhathi eside abantu Unolwazi esetshenziswa artichoke, elibuhlungu liwukuthi abantu abanjalo ezimbalwa kakhulu.
Imibimbi azungeze amehlo - balahle ngaphandle ukuzisola.